Joomla, Wordpress တို့ကို လေ့လာချင်သူတွေအတွက် first lesson | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Joomla, WordPress တို့ကို လေ့လာချင်သူတွေအတွက် first lesson
Joomla, WordPress တို့ကို လေ့လာချင်သူတွေအတွက် first lesson
Posted by Myanmar Web Designer on Feb 25, 2013 in Computers & Technology |9comments
X = Cross ဆိုတာကတော့ cross platform ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ cross platform ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ Microsoft က ထုတ်တဲ့ windows, Apple က ထုတ်တဲ့ Mac OS X နဲ့ အခြား Linux နဲ့ Solaris OS (operating system) တွေထဲက ဘယ် OS မှာမဆို တင်လို့ရတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
နောက်ထပ် P နှစ်လုံးကတော့ တစ်ခုက PHP ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုက Pearl ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုလုံးက programming language ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ programming language တွေက server (hosting) လိုအပ်ပါတယ်။ server မရှိရင် run လို့မရပါဘူး။ ဒါတွေ run ကြည့်ဖို့၊ လေ့လာဖို့ တစ်ကယ့် server ဝယ်မယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ် များမယ်၊ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ လုပ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ connection နဲ့ဆို နှလုံးရောဂါကုဖို့ ဆေးဖိုးပါထပ်ကုန်မယ် ။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ စက်ထဲမှာပဲ virtual server (server အတု) တင်ပြီးတော့ စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာကို ပြရရင်တော့ Myanmar Web Designer က လက်ရှိ SEO Services ပေးနေတဲ့ Singapore SEO Service website က joomla CMS(content management system) ကို အသုံးပြုပြီးတော့ ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး website မျိုးဆို အရင်ဆုံး ကိုယ့် ကွန်ပျူတာထဲမှာ အရင်ဆုံး အပြီးအစီးနီးပါးလောက် ပြင်ဆင်ပြီးမှ အွန်လိုင်းပေါ်တင်ကြတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး joomla တင်မကပဲ wordpress, drupal အစရှိတဲ့ အခြားသော PHP ကိုအသုံးပြုပြီးရေးရတဲ့ website တွေနဲ့ Pearl language ကို အသုံးပြုပြီး ရေးရတဲ့ website တွေအတွက်ဆို hosting လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့က hosting ပေါ်မှာပဲ run နိုင်တဲ့ language တွေမို့လို့ပါ။
Source: What is XAMPP – Myanmar CMS Tutorials
အားကိုတကြီးနဲ့ ၀င်လာလိုက်တယ် …
Link ပေးထားတယ်နော်၊ မြေပုံဆိုတာ အဲဒီလင့်ခ်ကို ပြောတာဆိုရင်တော့၊ နောက်ပိုင်း သင်ခန်းစာတွေ ဆက်တင်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး သင်ခန်းစာမို့လို့ နည်းနည်းပဲ ပါတာပါ။
သင်ခန်းစာ ဖတ်ရန် –> What is XAMPP?
အိုင်တီ.. ၀က်ဘ်ဒီဗလုပ်ပါလုပ်ချင်သူတွေ . အဲဒါကိုသေသေချာချာလေ့လာပြီး.. ကိုယ်တိုင်..ကိုယ့်ဝင်းဒိုးထဲ.. အင်စတောလုပ်သင့်တယ်..
တကယ်လက်တွေ့လောကမှာလည်း.. Web Development က.. Local နဲ့ အထပ်ထပ်စမ်းသပ်ပြီးမှ.. ဆာဗာကို အလုံးလိုက်ရွေ့တာပါပဲ..
ဘာဘဲပြောပြော မြန်မာပြန် ဆိုတော့ ကူးထားလိုက်တယ်။
အင်း … ကူးထားပါဗျာ၊ ကူးထားပါ၊ နောက်ဆိုရင် စက်ထဲမှာ ပြည့်လာတာပေါ့ … အဲကျရင်တော့ ပြန်မဖျက်နဲ့နော…
တခါတည်း စာတွေ.. ဒီထဲကူးထားလိုက်လို့.. မရဘူးလား..
.. အဲလိုဆို.. ဆွေးနွေးရ.. ကော်မန့်ရေးရပိုလွယ်မှာ…
ကိုရင်လူခါးဝက်ဘ်ဆိုက်က.. တခြားအကြောင်းအရာ.. ပိုသိချင်သူတွေ.. ဆက်သွားကြပေါ့..
အင်း .. တင်ချင်ပါတယ်ဗျာ၊ ဒါပေမယ့် ဒီမှာက တစ်ခုခုဆို post ကို edit လုပ်လို့မရလို့ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ နောက်ဆို အပြည့်တင်လို့ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့၊ အခုလည်း ပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ။